Apokalypsy 5 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
5 Ary hitako fa nisy horonam-boky voasoratra ambadika sy ambadika+ sady voahidy+ mafy tamin’ny tombo-kase fito, teo an-tanana havanan’Ilay nipetraka teo ambonin’ny seza fiandrianana.+ 2 Ary hitako fa nisy anjely mahery niantsoantso mafy hoe: “Iza no mendrika hanokatra ny horonam-boky ka hamaha ny tombo-kaseny?” 3 Fa tsy nisy na iray aza tany an-danitra na teto an-tany na tany ambanin’ny tany afaka nanokatra ilay horonam-boky na nijery ny tao anatiny. 4 Koa nitomany mafy aho satria tsy hita izay mendrika hanokatra ilay horonam-boky na hijery ny ao anatiny.+ 5 Hoy anefa ny iray tamin’ny anti-panahy tamiko: “Aza mitomany intsony. Ny Liona avy amin’ny fokon’i Joda,+ ny fakan’i+ Davida,+ dia efa nandresy+ ka ho afaka hanokatra ilay horonam-boky sy ny tombo-kaseny fito.” 6 Ary hitako fa nisy zanak’ondry+ nijoro teo akaikin’ny seza fiandrianana+ sy teo afovoan’ny zavamananaina efatra sy ny anti-panahy.+ Toy ny efa novonoina+ ho faty ilay zanak’ondry, izay manana tandroka fito sy maso fito. Tsy inona ireo maso ireo fa ny fanahy+ fiton’Andriamanitra irahina maneran-tany. 7 Koa nandeha ilay zanak’ondry, ka nalainy avy hatrany ilay horonam-boky teny an-tanana havanan’Ilay nipetraka teo ambonin’ny seza fiandrianana.+ 8 Ary rehefa noraisin’ny Zanak’ondry ilay horonam-boky, dia niankohoka teo anatrehany ny zavamananaina efatra sy ny anti-panahy+ efatra amby roapolo, izay samy nanana harpa+ sy vilia volamena feno emboka manitra. Tsy inona ilay emboka manitra+ fa ny vavaky+ ny olona masina. 9 Ary nihira hira vaovao+ izy ireo, nanao hoe: “Mendrika handray ny horonam-boky sy hamaha ny tombo-kaseny ianao, satria efa novonoina ho faty, ary ny ranao+ no nividiananao+ ho an’Andriamanitra,+ olona avy tamin’ny foko sy fiteny sy vahoaka ary firenena rehetra. 10 Ary nataonao fanjakana+ sy mpisorona+ ho an’Andriamanitsika+ ireo, ka ho mpanjaka+ hitondra ny tany.” 11 Ary nahita aho, ary reko ny feon’ny anjely maro nanodidina an’ilay seza fiandrianana sy ny zavamananaina ary ny anti-panahy. Ary niisa alinalina+ sy arivoarivo+ izy ireo, 12 nanao tamin’ny feo mafy hoe: “Mendrika handray fahefana sy harena sy fahendrena sy hery sy haja sy voninahitra ary fisaorana ny Zanak’ondry,+ izay efa novonoina+ ho faty.” 13 Ary ny zavaboary rehetra tany an-danitra sy teto an-tany sy tany ambanin’ny tany+ ary tany an-dranomasina, sy ny zava-drehetra tao aminy, dia reko nilaza hoe: “Ho an’Ilay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana+ sy ho an’ny Zanak’ondry+ anie ny fisaorana sy ny haja+ sy ny voninahitra+ ary ny hery mandrakizay mandrakizay!” 14 Ary hoy ihany ireo zavamananaina efatra: “Amena!” Dia niankohoka sy nivavaka+ ny anti-panahy.+